Trump ayaa codsaday in sariir weyn loogu rakibo diyaaradda cusub ee Air Force One | khaatumonews
Trump ayaa codsaday in sariir weyn loogu rakibo diyaaradda cusub ee Air Force One
Jul 18, 2018 - Aragtiyood
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu qorshaynayo in uu dib u naqshadeeyo diyaaradda madaxweynaha ee Air Force One, balse isaga xitaa ma hubo in uu isticmaali doono iyo in kale.
Trump oo waraysi siiyay taleefishinka CBS ayaa sheegay in diyaaradda cusub ay lahaan doonto middabada guduudka, caddaanka iyo buluugga, balse waxa ay diyaar noqon kartaa sanadka 2021-da oo ah marka uu dhammaado xilli xilleedkiisa hadda, wuxuuna kaliya isticmaali doonaa haddii dib loo doorto.
Madaxweynihii hore John F Kennedy iyo xaaskiisa Jacqueline Kennedy ayaa xushay midabka ay hadda diyaaradan leedahay sanadihii lixdameeyadii.
Trump ayaa qirtay in diyaaradda cusub ay kaliya isticmaali karaan madaxweynayaasha mustaqbalka.
Diyaaradda Air Force One ayaa ka kooban labo diyaaradood, middii koowaad waxa ay markii ugu horeysay duushay sanadkii 1959-kii, waxaana raacay madaxweyne Dwight D Eisenhower. Balse Kennedy ayaa markii dambe badalay middabada iyo naqshadda.
Dad badan ayaa durba dhaleeceeyay go’aanka Trump waxayna sheegeen in diyaaradda uu qorsheynayo ay u middabo egtahay tan uu wato madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin.
Trump ayaa sidoo kale lasoo tabiyay in uu ka cawday shukumaanada ku diyaarsan diyaarada Air Force One dusheeda, wuxuuna rabaa in la badalo.
Waxyaabaha kale ee uu doonayo in la badalo ayaa waxaa ka mid ah sariirta taala oo uu doonayo sariir ka weyn tan hadda diyaaradda u saaran. Waxa uu rabaa sariir la mid ah tan hadda ugu rakiban diyaaradda uu sida gaarka ah u leeyahay
Air Force One waxa ay hadda jirtaa 30 sano, markii ugu horeysayna waxaa ku duulay madaxweyne George H W Bush (Bush-ka Weyn).
Todobaadyo kadib markii la doortay Trump ayaa waxa uu soo qorey in shirkadda Boeing ee samaysa diyaaradda Air Force One ay lacag aad u qaali ah kaga iibiso diyaaradda, wuxuuna soo jeediyay in dalabka cusub ee diyaaradeed uu joojin doono.
Waxa uu sheegay in qiimaha ay ku iibinayso uu yahay $4 bilyan oo doolar, waxaana la sheegay in bishii feberaayo ee sanadkan uu heshiis la gaaray shirkadda, qiimaha cusubna uu yahay $1.4 bilyan, hase yeeshee lama xaqiijin qiimo dhimista intaas la’eg in ay jirto iyo in kale.